သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီဆုကြီးကို သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်တစ်ဦး ဆွတ်ခူးခဲ့တာကြောင့် ပျော်နေရတဲ့ G Fatt – Suehninsi
သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီဆုကြီးကို သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်တစ်ဦး ဆွတ်ခူးခဲ့တာကြောင့် ပျော်နေရတဲ့ G Fatt
လစဉ်လတိုင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ မျှော်လင့်နေရတဲ့ အောင်ဘာလေထီကတော့ ဒီနေ့မှာ (၁၉) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ရန်ကုန်ကပဲ ထပ်မံဆွတ်ခူးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ သရက်မြိုင်ရဲရိပ်သာမှ မယမင်းစံက ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး
သူကတော့ အဆိုတော် G-Fatt ရဲ့ Fan Girl စစ်စစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ G-Fatt ကတော့ ဝမ်းသာစွာမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “Wow Wow Wow …. ဒီလရဲ့ ထီ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုရှင်ဟာ .. ကျွန်တော့် WLGF ထဲကလို့သိရပါတယ်… အရမ်းပျော် အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်
ဗျာ .. သွေးမတော်သားမစပ် ကျွန်တော်တောင် ဒီလောက်ပျော်နေရင် ကာယံကံရှင် မိသားစုဆို ဘယ်လောက်တောင် ပျော်နေမလဲဗျာ .. ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ အများကြီး လုပ်နိုင်ပြီး မိဘကိုလိုလေးသေးမရှိ ထားနိုင်ပါစေကွယ်… ကိုကြီးကိုလည်း အများကြီးချစ်နိုင်ပါစေ .. ကဲနောက်လ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင်က Fan တွေထဲကပဲ ထပ်ဖြစ်မလား .. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ
ဖြစ်မလား ရင်ခုန်နေပါပြီ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ပရိသတ်လေးနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတချို့နဲ့အတူ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ မယမင်းစံကတော့ G-Fatt ကို အမှန်အကန်အားပေးသူတစ်ယောက်ဆိုတာ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးသိနိုင်မှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ…G-Fatt ကတော့ သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်တစ်ယောက် အမြင့်ဆုံးထီဆုကြီးဆွတ်ခူးခဲ့တာကြောင့် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာ မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လစဉျလတိုငျးမွနျမာပွညျသူပွညျသားတှေ မြှျောလငျ့နရေတဲ့ အောငျဘာလထေီကတော့ ဒီနမှေ့ာ (၁၉) ကွိမျမွောကျ ဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီဖွဈပွီး ဒီတဈခေါကျမှာလညျး ရနျကုနျကပဲ ထပျမံဆှတျခူးခဲ့ပွနျပါတယျ။ မရမျးကုနျးမွို့နယျရှိ သရကျမွိုငျရဲရိပျသာမှ မယမငျးစံက ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈပွီး
သူကတော့ အဆိုတျော G-Fatt ရဲ့ Fan Girl စဈစဈတဈယောကျဖွဈတာမို့ G-Fatt ကတော့ ဝမျးသာစှာမြှဝခေဲ့ပါတယျ။ “Wow Wow Wow …. ဒီလရဲ့ ထီ သိနျးတဈသောငျးခှဲ ဆုရှငျဟာ .. ကြှနျတေျာ့ WLGF ထဲကလို့သိရပါတယျ… အရမျးပြျော အရမျးဂုဏျယူပါတယျ
ဗြာ .. သှေးမတျောသားမစပျ ကြှနျတျောတောငျ ဒီလောကျပြျောနရေငျ ကာယံကံရှငျ မိသားစုဆို ဘယျလောကျတောငျ ပြျောနမေလဲဗြာ .. ကုသိုလျကောငျးမှုတှေ အမြားကွီး လုပျနိုငျပွီး မိဘကိုလိုလေးသေးမရှိ ထားနိုငျပါစကှေယျ… ကိုကွီးကိုလညျး အမြားကွီးခဈြနိုငျပါစေ .. ကဲနောကျလ သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုရှငျက Fan တှထေဲကပဲ ထပျဖွဈမလား .. ကြှနျတျောကိုယျတိုငျပဲ
ဖွဈမလား ရငျခုနျနပေါပွီ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ပရိသတျလေးနဲ့ ရိုကျကူးထားတဲ့ပုံတခြို့နဲ့အတူ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ မယမငျးစံကတော့ G-Fatt ကို အမှနျအကနျအားပေးသူတဈယောကျဆိုတာ ပုံလေးတှကွေညျ့ပွီးသိနိုငျမှာပါ ပရိသတျကွီးရေ…G-Fatt ကတော့ သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတျတဈယောကျ အမွငျ့ဆုံးထီဆုကွီးဆှတျခူးခဲ့တာကွောငျ့ ဝမျးသာဂုဏျယူစှာ မြှဝပေေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။